Naniry, Tena Naniry Fatratra Fifanarahana Visa Maimaim-poana Amin’ny Vondrona Eoropeana I Zeorzia , Ary Tonga Ny Fety Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2017 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, bahasa Indonesia, Português, English
Ny sainam-pirenena Zeorziana. Asa manokan'ny mpanoratra SKopp miorina amin'ny ‘Dosie:Brdzanebuleba 31.pdf’ . Tao amin'ny Creative commons.
Nanomboka nankalaza ny roa andro manamarika ny fahombiazan'ny firenena tamin'ny tolotra fifanarahana maharitra ho an'ny olom-pirenena mba hankafy ny visa fandehanana maimaim-poana any amin'ny firenen'ny Vondrona Eoropeana i Zeorzia, firaisana Sovietika teo aloha tamin'ny 28 Martsa .
Nisy vokany ny visa fandehanana maimaim-poana any amin'ny Vondrona Eoropeana !!! Arahabaina, Eoropa i Zeorzia !!!
#ZeorziaEUVisaMaimaimpoana: #Tbilisi #Seranam-piaramanidina Iraisampirenena amin'ny andro voalohan'ny #VondronaEoropeana tsy mila maka visa ho an'ny olom-pirenena ao #Zeorzia.
Araka ny voalazan'ny tranonkala mifantoka amin'i Zéorzia , Fanaraha-maso Demaokrasia sy Fahafahana tamin'ny tatitra hoe:
Nisy ny fankalazana tao an-drenivohitra Tbilisi tamin'ny Alatsinainy satria afaka mitety faritra tsy misy visa ho any amin'ny faritra Schengen midadasika any Eoropa ny teratany Zeorziana nanomboka tamin'ny 28 Martsa.
Anisan'ireo manampahefana nanatrika ny fampisehoana Gala naharitra ora roa ny Praiminisitra Giorgi Kvirikashvili tao amin'ny Kianjan'i Eoropa izay nanamarika ny famaranana ny fankalazana roa andro . Nahitana fampisehoan'ny tarika, ny orkesitra sy ny mpihira opera ny lanonana ary nifarana tamin'ny afomanga sy ny hiram-pirenena Zeorziana.
Afaka mitsidika ny faritra midadasika Schengen ao Eoropa mandritra ny 90 andro ao anatin'ny fe-potoana maharitra 180 andro ireo teratany Zeorziana nanomboka tamin'ny Talata. Afaka mampiasa ny rafitra tsy mila maka visa ihany koa ireo manana pasipaoro Zeorziana monina any amin'ny faritra msintaka Abkhazia sy any Atsimon'i Ossetia .
Nomena toromarika manokana ny mpiasan'ny ladoany mba hanome torohevitra momba ny dingana hatao sy ny fisavana ny antontan-taratasin'ny olona, hoy ny Minisitry ny Atitany tao amin'ny fampahafantarana fohy manokana.
Na dia nanomboka hatrany amin'ny taona 2013 aza ny fifampiraharahana niaraka tamin'ny antsoina hoe drafitry ny hetsika visa malalaka (VLAP), dia tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity vao nanao sonia ny fifanarahana farany i Zeorzia . Navoaka tao amin'ny gazetin'ny Vondrona Eoropeana ny antontan-taratasy tamin'ny 8 Martsa ary nanan-kery nanomboka tamin'ny Talata.
Naharitra ela vao vita ny fifanarahana, satria toa nanakana izany ireo firenena maro tao amin'ny Vondrona Eoropeana izay niferotr'aina noho ny ” fifindra-monina mandreraka” , ​​hoy ny tatitry ny DFW . Kanefa noraisin'ny fiarahamonina tamin-kafaliana ny vokatra farany izay lasa miompana bebe kokoa amin'ny Tandrefana ao anatin'ny fihenjanana ara-politika miaraka amin'i Rosia ary nahatratra ny fara tampony nandritra ny ady ara-miaramila tamin'ny faritra nisintaka tamin'ny taona 2008.
Nisioka ny sary nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy izay maneho ny sakafo mahazatra Zeorziana khinkhali (karazana hena baolina) tamin'ny lovia miloko manga ny toniandahatsoratry ny Global Voices any Kaokazy teo aloha sady mpanao gazety monina ao Tbilisi Onnik Krikorian , izay mampatsiahy ny sainam-pirenen'ny Vondrona Eoropeana .
Tena mahafinaritra. Sary amin'izao fotoana
Mandritra izany fotoana izany, tian'ny Praiminisitra Zeorziana Giorgi Kvirikashvili kokoa ny mihevitra ny sata vaovao ho toy ny fanehoana ny “fiverenana” amin'ny Eoropa noho ny fiheverana izany ho toy ny fandraisana voalohany .
Miverina amin'ny fianakaviana Eoropeana i #Zeorzia